पूर्वसचिव पत्नी मुना र विजय चौधरीको पो’स्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक ! – Khabarhouse
पूर्वसचिव पत्नी मुना र विजय चौधरीको पो’स्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक !
Khabar house | २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १६:१४ | Comments
काठमाडौं : डोरीले घाँ’टी कसेर पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको ह’त्या गरेको पोस्ट मा’र्टम रिपोर्टबाट खुलेको छ । मृ’तकद्वय कार्की र घरेलु कामदार विजय चौधरीको पोस्ट मा’र्टम रिपोर्ट शुक्रबार प्राप्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेलका सहायक प्रवक्ता तथा घ’टनाको अनुसन्धानमा सं’लग्न प्रहरी अधिकृत डिएसपी सन्तोष तामाङले पोस्ट मा’र्टम रिपोर्ट आइसकेको बताए।
मुनाको मृ’त्युको कारण ‘लिगेचर स्ट्रेङ्‌गुलेसन’ भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जसको अर्थ ‘डोरीले घाँ’टीमा बल पूर्वक क’सेर सास फे’र्न नदिई मा’रिएको’ भन्ने हुन्छ । रिपोर्टमा चौधरीको मृ’त्युको कारण भने ‘ह्याङ्‌गिङ’ (आफ्नै तौलले ता’नेर नि’सा स्सिएर मृ’त्यु) भनी उल्लेख गरिएको तामाङले जानकारी दिए। गत सोमबार (माघ २७ गते) पूर्वसचिव कार्कीको सानेपास्थित निवासमा पत्नी मुना ग’म्भीर घा’इते अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।
उनलाई उद्धार गरी उपचारका लागि ललितपुरकै स्टार अस्पताल लगिएको थियो। अस्पताल पुर्‌याए लगत्तै चिकित्सकले उनलाई मृ’त घोषणा गरेका थिए। कामदार चौधरी भने त्यसबेलानै झु’न्डिएको अवस्थामा मृ’त फेला परेका थिए। घ’टनास्थलको प्रकृतिका आधार मा चौधरीले मुनाको ह’त्या गरेपछि स्वयंले ‘आत्मह’त्या’ गरेको प्रहरीले आशङ्‌का गर्दै आएको छ। घ’टनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।